Eulaly: « Tanjona ny hahatafita hafatra » | NewsMada
Eulaly: « Tanjona ny hahatafita hafatra »
Groupe Eulaly, mivoy ny hira evanjelika, nanomboka ny taona 2011. Mampiavaka azy ireo ny fitadiavana ny fomba rehetra hahatafita ny hafatra, izay zava-dehibe indrindra amin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra, ny fiderana Azy, amin’ny fankaherezana sy ny fitarihana ny olona tsy hisaraka Aminy.
Mirona kokoa amin’ny famolahana ireo gadon-kira mihetsiketsika (sud’af, salegy, tsapiky, sega, mangaliba) ny tarika, izay naorin’i Eugene sy i Larissa ary i Lydia, saingy ahitana mpikambana 15 ankehitriny. Nomarihan’i Eugene fa miova, arakaraka ny toerana anaovan’izy ireo fampisehoana, ny fianjaika eny an-tsehatra. Toy izany koa ny handrafetana ny fandaharan-kira. Ezahina ny hanakaiky kokoa ny gadona sy ny fitafin’izy ireo.
“Ny anton’izany, ny hanamorana ny fampitana ny hafatra amin’ny mpijery”, hoy ihany i Eugene, sady mpitendry, mpihira ary mpamoron-kiran’ny tarika. Na izany aza, tsy mijanona hatreo amin’ny fiangaliana ny hira sy ny dihy tropikaly evanjelika ny groupe Eulaly fa miangaly gadona hafa, toy ny bagasy sy ny “slow”.
An-dalam-piketrehana rakikira sy sary andiany fahefatra, ankehitriny, ny tarika. Anisan’ireo handrafitra izany ny “Tano mafy i Jesosy”, narindra amin’ny gadona avy atsy Afrika Atsimo. Mitohy koa ny fitetezam-paritry ny tarika, izay efa manana sanganasa maherin’ny 75.